Salaadda dagaalka ruux ahaaneed ee maanka | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Salaadda Salaadda dagaalka ruuxiga ah ee maanka ku haysa
Salaadda dagaalka ruuxiga ah ee maanka ku haysa
Maanta waxaan la tacaali doonaa salaadda dagaalka ruuxiga ah ee maanka. Maskaxda ninku waxay haysaa fikrado badan, iyo fikradahaas, waxay u rogaan dabeecad ay ragga muujiyeen. Ma jiro wax ficil ah ama wax ka qabad ah oo uu ninku qaadi doono isaga oo aan ka baaraandegaynin fikirka ka soo baxa maskaxda marka hore. Haddii Ibliisku doonayo inuu nin yeesho, wuxuu qabtaa maskaxda qofka noocaas ah. Mar haddii maskaxdu mashquul tahay, ninku wuxuu shaydaan u yahay shaydaanka.
Layaab ma leh Qorniinka ku jira kitaabka Maahmaahyadii 4:23 Qalbigaaga ku hayso dadaal kasta; waayo waxaa ka soo baxa arrimaha nolosha. Wax kasta oo aan soo bandhigno waxay ka bilaabmaan maskaxda. Dhawaan, waxaan aqrinay taxane war ah oo ku saabsan ragga oo kufsada gabdhaha yar yar, dadka midba midka kale u dilo arrimo cibaado lacageed, iyo dhamaan qormooyinka xunxun. Nin gabadh yar kufsaday ma istaagin uun maalin un wuxuu isku qasbay gabadha miskiinka ah ee aan waxba galabsan. Fikirkaas ayuu ku hayey maskaxdiisa muddo dheer.
Ilaah wuu fahmaa awooda maskaxda, taasina waa sababta uu kugula taliyay inaan qalbigayaga ku hanuunno dadaalka oo dhan maxaa yeelay waxay ka soo baxeysaa arrimaha nolosha. Waxaan ubaahanahay inaan maskaxdeena ka ilaalino wasakhowga sheydaanka.
Haddii Ibliisku ku guuleysto inuu sumoobo maskaxdeena Masiixiyiin ahaan, innaga ayaa ku jirna. Waa inaan barannaa inaan maskaxdeenna ku hagno erayga iyo ruuxa Eebbe si uusan Ibliisku awood u yeelan inuu qaato. Waxaan diyaarinay liisaska salaadda dagaalka ruuxiga ah ee maanka lagu hayo. Waxay naga caawin doonaan hagista fikradaheena ka dhanka ah maareynta shaydaanka.
Sayidow Ilaahow, maanta waan ku soo hor socdaa, oo waxaan weyddiisanayaa xoogga ruuxiga ah ee qalbigayga. Waxaan rabaa in qalbigaygu noqdo aalad yar oo gacanta shaydaanka ku jirta. Ma doonayo in qalbigeyga si joogto ah sheydaanku u maamulo. Waxaan Ilaah ka baryayaa in nalka ereygaagu u iftiimiyo kanaalka qalbigayga, oo ay ka dhigto mid aan loo geli karin khayaanada shaydaanka ee magaca Ciise.
Rabbi Ciise, Qorniinku wuxuu leeyahay cabsida Rabbiga waa bilowga xigmadda. Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad cabsidaada ku abuurto qalbigayga, iga dhig mid aan kaa baqo Sayidow, oo igu yeel awood aan u noqon karo xoogga shaydaanka magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa khalkhal galinta jinni kasta oo laga yaabo inay damacdo inay maskaxda ku qaataan. Maskaxda ayaan ku hayaa dhiiga qaaliga ah ee Ciise. Waan diidanahay inaan maankayga ku lumiyo khiyaanooyinka khiyaanada ee sheydaanka. Rabbi Ciise, waxaan kuu baryayaa xooggaaga iyo xigmaddaada si aad u ogaato howlaha shaydaanka. Waan diiday in aan noqdo dabinka shaydaanka. Naftayda ayaan ka sara marayaa jirrabaadda iyo shaydaanka oo dhan si aan maskaxdayda ugu dhaawaco magaca Ciise.
Ajande kasta oo shaydaan oo laga yaabo inuu doonayo inuu maankayga ku hawlgalo waa la kansali doonaa magaca Ciise. Fikradeyda, shucuurtayda, iyo howlahayga ayaan u hibeeyo Ilaaha Qaadirka ah. Waxaan kasoo horjeedaa fikir kasta oo shar ah oo ku dhaca magaca Ciise.
Aabe Sayidow, dareen kasta oo damac ah ayaa lagu gubay magaca Ciise. Dareen kasta oo rabitaan ah oo ah hilibka iyo maskaxda, Sayidow, waxaan ku baabi'in doonaa awoodaha qaaliga ah ee Ciise.
Waan ka sii xoog badnaan doonaa markii dhib iyo dhibaatooyin jiro. Aniga waxaan u diidanahay xishoodka inaan caabudo cadawga. Hadda ka dib, waxaan ku dhawaaqayaa xooggayga xagga kartida maskaxda ee magaca Ciise.
Aabe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad lahaato maanka, ruuxa iyo jirka. Waxaan kaa codsanayaa inaad si buuxda ula wareegto shaqadayda oo dhan magaca Ciise. Sayidow ciise, waxaan ku siinayaa noloshayda, maskaxdayda, iyo naftayda, oo ha xukumo qalbigayga, boqorka nafta ha iga badbaadiyo cudurka beenta ah ee ku dhaca magaca Ciise.
Waxaan kordhiyaa xasaasiyadda ruuxiga ah. Waxaan ku xoojinayaa feejignaanta ruuxiga ah awoodaada iyo magacaaga. Waxaan amar ku bixinayaa inaan noqdo mid xasaasi ah oo aan ku garto xumaanta sheydaanka. Baybalku wuxuu nooga digay inaynaan ka jaahil bixin xeeladaha sheydaanka. Waxaan weydiisanayaa xasaasiyad ruuxi ah oo igu filan si aan u Garto khayaanada sheydaanka.
Sayidow, waxaan kuu baryayaa Ruuxaaga quduuska ah iyo xooggaaga. Like days the that Just....... Lord Lord Lord Lord the the the the the the the the like like like the like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like Sidii waagii hore, Oo ay maankoodu isku kaa halleeyeen, Sayidow. Waxaan kaa baryayaa in isla saamigaas, inaad qalbigayga ka dhigto mid adag oo ka caaggan Ibliiska. Waxaan kuu baryayaa Ruuxaaga Quduuska ah oo had iyo goor noolayn doona jidhkayga dhimanaya. Waxaan kaa baryayaa inaad igu siiso magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad xitaa saacadaha dhibka iyo dhibaatooyinka, aad i caawiso sidii aan rajadayda kugu saari lahaa oo aan kuu aamini lahaa adiga. Nimcada had iyo jeer sii wadida inaad sameyso waxa saxda ah ee ku amaani doona Aabaha oo aan Ibliiska aheyn, Sayidow i sii magaca Rabbi.
Sayidow, waxaan shaaca ka qaadayaa lahaanshaha qalbigayga iyo maankayga Masiix Ciise Masiix. Hadda iyo hadda, neeftayda iyo hadalladayda, Oo fikirradayduna waxay noqon doonaan xagga Rabbiga. Waan diidanahay inaan wax kale maskaxda geliya, fikirradayda iyo ra'yigayga oo dhan adigaa iska leh, Sayidow Ciise. Waan ku wada baabbi'iyaa fikir kasta oo xunxun ee ku dhaca magaca Rabbiga magaca Ciise.
Fikir kasta oo igu horseedi doona inaan ku dembaabo dadka iyo Ilaah, waan diidayaa inaan qalbigayga u oggolaado. Rabbiga ka cabsashadiisu haatan waa qalcaddayda cusub. Waxaan ku dhawaaqayaa inaan xor ka ahay fikirrada iyo himilooyinka xun. Waxaan amar ku bixinayaa inaan xor ku ahay magaca Ciise.
Awoodda Ilaaha Qaadirka ah ayaa noloshaada dabooli doonta oo kuu muujin doonta khaa'inka cadawga. Waxaan amar ku bixinayaa in Ilaah ku siiyo iyada magaca Ciise.
article PreviousMUUQAALKA KARIIMKA AH EE KU SAABSAN TILMAAMAHA CUSUB
Next articleSalaadda Dagaal iyo Xeerarka
30 Qodobbada Salaadda ee Loogu Jeedo Jabinta Xumaanta Aabayaasha
Sideen Ku Ogaadaa Marka Salaaddayda Loo Jawaabo?